कति कमायो एक हप्तामा चलचित्र ’शत्रु गते’ ले ? – भिडियो हेर्नुाहाेस – Rabin's Blog
काठमाडौँ । गत चैत्र ९ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ’शत्रु गते’ ले ६ दिनको हिसाव सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा पत्रकार भेटघाटको आयोजना गर्दै राजधानीको लागि वितरक बिके फिल्म्सको तर्फबाट गोपाल काजी कायस्थ र मोफसलको लागि वितरक एफडी कम्पनिका बिक्रम पराजुली्ले संयुक्त रुपमा हिसाब सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कलेक्सन सार्वजनिक गरिने क्रममा फिल्मका निर्माता तथा कलाकार हरिवंश आचार्य , किरण केसी , आँचल शर्मा र निर्देशक प्रदीप भट्टराई उपस्थित थिए । फिल्मलाई मह सञ्चारको ब्यनारमा निर्माण गरिएको छ भने यसका प्रस्तुतकर्ता किरण केसी हुन् ।
पुरूषहरूले अर्काकि श्रीमति ताक्न हुने महिलाले चै अर्काको पति ताक्न किन नहुने? हेर्नुस भिडियो